RASMI: Kabtanka Naadiga Napoli ee Marek Hamsik oo ku biiraya kooxda… – Gool FM
RASMI: Kabtanka Naadiga Napoli ee Marek Hamsik oo ku biiraya kooxda…
(Naples) 14 Feb 2019. Marek Hamsik ayaa la soo warinayaa inuu isaga dhaqaaqi doono dalka Talyaaniga oo uu muddo badan ka ciyaarayay, isla markaana uu ku biiri doono Naadi ka dhisan horyaalka dalka Shiinaha.
Kabtanka Napoli ee Marek Hamsik ayaa ogolaaday inuu u dhaqaaqo kooxda Dalian Yifang ee ka dhisan horyaalka Shiinaha ee Chinese Super League.
Laacibkan khadka dhexe ee Slovakia oo 31-sano jir ah ayaa dhaliyey 121 gool 520 kulan oo uu u saftay naadiga ka dhisan horyaalka Serie A kaddib markii uu ku soo biiray kooxda sanadkii 2007.
Isagu waa kan ugu goolasha badan kooxda reer Talyaani ee Napoli, isagoo sidoo kale haysta rikoorka ciyaaryahanka ugu safashada badan naadiga.
Madaxweynaha kooxda Napoli ee Aurelio De Laurentiis oo xaqiijiyey bixitaanka Hamsik ayaa yiri: “Waxaan u rajaynayaa Marek Hamsik inuu farxad ku dareemi doono Shiinaha, mar walba Ablaabada halkaan waa u furan yihiin isaga.”
31-sano jirkaan Hamsik ayaa noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda Napoli bishii December ee sanadkii 2017-kii kaddib markii uu rikoorkaas kala wareegay Diego Maradona oo ku hayey 115-gool.
Sidoo kale bishii November sanadkii 2018-kii ayuu ka sare maray Giuseppe Bruscolotti oo guud ahaan kooxda u saftay 511 kulan, waxaana uu Hamsik sidaa ku noqday ciyaaryahanka ugu safashada badan kooxda Napoli.
Hamsik ayaa kooxda kubadda cagta Napoli kula guuleystay labo goor Coppa Italia.
Waxa uu Hamsik kula biiri doonaa kooxda Dalian ciyaaryahankii hore ee kooxda Atletico Madrid iyo gabarka xulka qaranka Belgium Yannick Carrasco & Sidoo kale Weeraryahankii hore Naadiga Benfica ee Nicolas Gaitan.
Dalian Yifang have reached an agreement with Napoli to sign Marek Hamsik, confirms club President Aurelio De Laurentiis pic.twitter.com/Vhrtkn7pao
Tababarihii hore da’yarta kooxda Manchester United ee soo saaray Giggs, Scholes, Beckham iyo Gary Neville oo geeriyooday
Mauro Icardi oo diiday inuu u ciyaaro kooxdiisa Inter kaddib markii laga qaaday astaanta Kabannimada